Exit Intent ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကူးပြောင်းမှုနှုန်းများကို မြှင့်တင်ရန် ၎င်းကို မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။ | Martech Zone
လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် e-commerce site တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းဆွဲရန် အချိန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ငွေများစွာကို ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် စျေးကွက်ရှာဖွေသူတိုင်းနီးပါးသည် ၎င်းတို့၏ site သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအသစ်များရရှိရန် ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်ကြသည်… ၎င်းတို့သည် လှပသောထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများ၊ ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများ၊ အကြောင်းအရာများစသည်တို့ကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ သင့်တွင်အဖြေများ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် သင်ရှာဖွေနေသောဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်ဟု ထင်သောကြောင့် သင့်ဧည့်သည်ရောက်လာသည် ဘို့။
သို့သော် ထိုဧည့်သည်ရောက်လာပြီး တတ်နိုင်သမျှဖတ်ရန် အကြိမ်ရေများလွန်းသည်... ထို့နောက် သင့်စာမျက်နှာ သို့မဟုတ် ဆိုက်မှ ထွက်သွားပါ။ ဒါကို တစ်ခုအနေနဲ့ ခေါ်တယ်။ ထွက်ပေါက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင်။ ဧည့်သည်များသည် သင့်ဆိုဒ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားရုံမျှမက… ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ထွက်ခွာနေကြောင်း သဲလွန်စများ ပေးလေ့ရှိသည်။ ဒါကို ခေါ်တယ်။ ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်.
Exit Intent ဆိုတာ ဘာလဲ။
သင့်စာမျက်နှာရှိ ဧည့်သည်တစ်ဦးမှ ထွက်ခွာရန် ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ အချို့အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်-
Direction အဖွဲ့ - ၎င်းတို့၏ mouse cursor သည် စာမျက်နှာကို browser ရှိ address bar သို့ ရွှေ့သည်။
အလျင် - ၎င်းတို့၏ mouse cursor သည် browser ရှိ address bar သို့ အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
ဟန်အမူအရာ - ၎င်းတို့၏ mouse cursor သည် စာမျက်နှာအောက်သို့ မရွေ့တော့ဘဲ ၎င်းတို့သည် ရွှေ့ခြင်းကို ရပ်သွားစေသည်။
Conversion optimization ကျွမ်းကျင်သူများသည် ဤလမ်းကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး မောက်စ်ကာဆာကို စောင့်ကြည့်သည့် စာမျက်နှာများတွင် ရိုးရှင်းသောကုဒ်ကို ရေးခဲ့ပြီး လာရောက်သူသည် မည်သည့်အချိန်တွင် ထွက်မည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ထွက်ပေါက် ရည်ရွယ်ချက် အပြုအမူကို ဖော်ထုတ်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ထွက်ပေါက် ပေါ်လာခြင်း... ဧည့်သည်နှင့် ထိတွေ့ရန် နောက်ဆုံးထွက်ပေါက် အားထုတ်မှုတစ်ခု စတင်သည်။
Exit intent pop-ups များသည် မယုံနိုင်လောက်စရာ ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြထားသည်-
ဖြည့်စွက်ပါ စျေးလျှော့ပေးသောနံပါတ် ဧည့်သည်သည် session တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ရန်နှင့်ဝယ်ယူမှုပြုလုပ်ရန်။
ပရိုမိုးရှင်းလုပ်မယ့်ဟာ ပွဲ သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းချက် ဧည့်စာရင်း သွင်းခိုင်းပါ။
တစ်ခုတောင်းဆိုပါ။ အီးမေးလိပ်စာ သတင်းလွှာ သို့မဟုတ် အီးမေးလ် အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တွန်းအားပေးရန်။
Exit Intent Pop-Ups က ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်သလဲ။
အမျိုးမျိုးသောရင်းမြစ်များအရ၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ဤနေရာလေးတွင်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွင် 3% မှ 300% တိုးလာရန် မျှော်လင့်နိုင်သည် (CRO) ကိရိယာ။ အနည်းဆုံးတော့ ထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတာ သိတဲ့ ဧည့်သည်နဲ့ ဆက်ဆံဖို့ ဘာကြောင့် မကြိုးစားတာလဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် ဉာဏ်မမီပုံရသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ infographic ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောသုတေသနတွင် Visme သည် Exit Pop-ups ၏အားသာချက်5ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် သင့်ဆိုဒ်မှထွက်ခွာသွားသော ဧည့်သည်တစ်ဦးကို ဆွဲဆောင်ရာတွင် လုံးဝထိရောက်မှုရှိပါသည်။
၎င်းတို့သည် သင့်ဆိုက်နှင့် လာရောက်လည်ပတ်သူ၏ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုအတွင်း ပေါ်လာသည့် ပေါ့ပ်အပ်များထက် ၎င်းတို့သည် အနှောင့်အယှက်နည်းပါးသည်။
၎င်းတို့သည် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး အာရုံထွေပြားမှုကင်းသော ခေါ်ဆိုမှု-လုပ်ဆောင်ရန် (CTA).
သင်လာရောက်လည်ပတ်သူအား အသိပေးထားပြီးဖြစ်သည့် သင်၏တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ကို ၎င်းတို့က အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်။
သူတို့ဟာ အတော်လေး အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်… ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမှ မကျန်တော့ပါ။
infographic ထဲမှာ၊ Pop-Ups မှထွက်ရန် Visual Guide- သင်၏ Conversion Rate ကို 25% နေ့ချင်းညချင်း မြှင့်တင်နည်းVisme သည် အောင်မြင်သော ခန္ဓာဗေဒကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက် pop-upမည်ကဲ့သို့ ပေါ်လာရမည်၊ ပြုမူနေထိုင်ရမည်၊ ၎င်းတို့သည် အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်ကို ပေးဆောင်သည်-
၎င်းသည် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
ပေါ့ပ်အပ်ကို ထွက်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် နည်းလမ်းတစ်ခု ကမ်းလှမ်းပါ။
စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါနဲ့… sessionတိုင်းကို သင်ပြဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
သင်၏တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ကို ထောက်ခံရန် သက်သေခံချက် သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကို ထည့်ပါ။
မတူညီသောပုံစံများကို ပြင်ဆင်ပြီး စမ်းသပ်ပါ။
ငါတို့ထဲကတစ်ယောက်အတွက် Shopify ဖောက်သည်များ၊ ဆိုက်တစ်ခု အဝတ်အစားများကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက် ပေါ့ပ်အပ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Klaviyo လျှော့စျေးကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အတူ လက်ခံသူသည် ၎င်းတို့၏စာပို့စာရင်းတွင် စာရင်းသွင်းသည့်အခါ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်ကို မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာရမည်ကို ၎င်းတို့အား မိတ်ဆက်သည့် ကြိုဆိုသည့် ခရီးလေးတစ်ခုတွင် စာရင်းသွင်းသူထံသို့လည်း ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင့်ဖွင့်ရန် လာရောက်သူ 3% ခန့်ကို ရရှိပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ 30% သည် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန် လျှော့စျေးကုဒ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်... မဆိုးပါ။
exit intent pop-ups ၏ နောက်ထပ်နမူနာအချို့ကို သင်ကြည့်ရှုလိုပါက၊ ဤနေရာတွင် စတိုင်များ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်အချို့ကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Intent Pop-Up နမူနာများမှ ထွက်ပါ။
Tags: စွန့်ပစ်ခြင်းbrowser လေယာဉ်ကူးပြောင်းမှုနှုန်း optimizationကူးပြောင်းနှုန်းထားများcroလျှော့စျေးကမ်းလှမ်းမှုအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်ကြေးပေးသွင်းထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်infographicKlaviyomouse ကိုအမူအရာမောက်အလျင်pop-up ပုံစံshopifyvisme
သဘောတူညီချက်ပြီးနောက်- ဖောက်သည်များအား အောင်မြင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ဖောက်သည်များအား ဆက်ဆံနည်း
21:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 09
အနည်းဆုံး 2008 မှ တည်ရှိသောအရာကို သူတို့ မည်သို့ မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည် (သူတို့ 2010 ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်)။ ဤသည်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၈ မှဖြစ်သည်။ http://www.warriorforum.com/main-internet-marketing-discussion-forum/13369-how-do-you-make-unblockable-exit-popup.html – exit-intent ပေါ့ပ်အပ်များအကြောင်း ပို့စ်မှ- “… သင်ရနိုင်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံးမှာ သင့်ဧည့်သည်၏ mouse cursor သည် စခရင်၏အပေါ်ဆုံးနားသို့ ရွေ့လျားနေသည်… ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် ပိတ်ခလုတ်ကို နှိပ်တော့မည်ဟု သင်ယူဆနေပါသည်။ ဤသည်မှာ ပိတ်ဆို့၍မရသော ကျွန်ုပ်၏ ထွက်ပေါက် ပေါ့ပ်အပ်ဖြစ်သည်- လုပ်ဆောင်ချက် ပေါ့ပ်အပ်- အာရုံစူးစိုက်မှု-ဖမ်းဆုပ်ခြင်း မပိတ်နိုင်သော ပေါ့ပ်အပ်များ သင့်ဧည့်သည်များ စာမျက်နှာမှ ထွက်ခွာသည့်အခါ…”။
ထို့အပြင်၊ 27 ခုနှစ် ဧပြီလ 2012 ရက်နေ့တွင် ကုဒ်လိုင်း5လိုင်းခန့်တွင် 'exit-intent' နည်းပညာကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဤကုဒ်အပိုင်းအစ ရှိပါသည်- http://stackoverflow.com/questions/10357744/how-can-i-detect-a-mouse-leaving-a-page-by-moving-up-to-the-address-bar
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်ရက်စွဲသည် အောက်တိုဘာ 25 ရက်၊ 2012 ဖြစ်သည်။ Google အရ ဦးစားပေးရက်စွဲသည် ဧပြီလ 30၊ 2012 (http://www.google.com/patents/US20130290117)
Quicksprout မှ နောက်ထပ်ကိုးကားချက်။ http://www.quicksprout.com/forum/topic/bounce-exchange-alternative/ ပို့စ်- “2010 တွင် ScreenPopper.com သည် နိုင်ငံတဝှမ်း 1.5 နှစ်ကြာ ခရီးလမ်းတွင် ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာကို ရှာမတွေ့သောကြောင့် မီနီဗန်းနောက်ဘက်တွင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါ၊ ထိုအချိန်တွင် တစ်ခုတည်းသော ကမ်းလှမ်းချက်မှာ တောင့်တင်းလွန်းပြီး ထည့်သွင်းရန် ခက်ခဲသော ပေါ့ပ်အပ်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်။" ၎င်းသည် 'မူပိုင်ခွင့်' ကိုမတင်သွင်းမီ2နှစ်အလိုတွင်ဖြစ်သည်။
Bounce Exchange နိဂုံးချုပ်ရန်မှာ ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခု ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို မတီထွင်ခဲ့ဘဲ ၎င်းတို့သည် “နည်းပညာ” အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ သူတို့ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေက Google နဲ့5မိနစ်လောက်ကြာမှ ရှာမတွေ့တာကို ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ တွေးမိပါတယ်။ ပြီးတော့ ငါက ရှေ့နေမဟုတ်ဘူး။ မကြိုက်တဲ့သူက သူတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းအတွက် $3000-$5000 ယူကြပြီး အခြားသော စျေးသက်သာသော ဖြေရှင်းနည်းများ ရှိမနေချင်ကြ (အဘယ်ကြောင့် အခြား “မူပိုင်ခွင့်” လိုအပ်ပါသနည်း။)
21:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 55
တကယ့်မူပိုင်ခွင့်ကို မဖတ်ဖူးပေမယ့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုတာ တစ်ခုခုကို သင်တီထွင်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင်သည် ဗျူဟာတစ်ခုနှင့် တိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
21:2014 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 46 တွင်
မင်္ဂလာပါ @douglaskarr:disqus – မူပိုင်ခွင့်၏ ပထမအပိုဒ်နှစ်ခုနှင့် ၎င်း၏ စိတ္တဇ (အထက်လင့်ခ်တွင်) ကို ကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့ပြီး မူပိုင်ခွင့်၏ အဓိကတောင်းဆိုချက်မှာ 'ထွက်ပေါက်-ရည်ရွယ်ချက်' နည်းပညာနှင့် အတိအကျဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် mouse ခြေရာခံခြင်းကို တီထွင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ ကျွန်တော်ယူလာခဲ့တဲ့ လင့်ခ်တွေက အဲဒါကို လုံးဝမတီထွင်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြတယ်။ အဲဒါက ကျွန်တော့်အမြင်မှာ မှားနေတယ်။ ပြီးတော့ exit-intent script ကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့ တွေးနေတာ ဒါမှမဟုတ် အဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာများစွာထဲက တစ်ခုကို အသုံးပြုနေတာကြောင့် (အခြားရွေးချယ်စရာ 1 ခုထက်မနည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်...)။ အကယ်၍ Bounce Exchange ၏မူပိုင်ခွင့်ကို ၎င်းတို့က ပိတ်ပင်ရန် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် အခြားစျေးပေါသော အခြားရွေးချယ်စရာများကို အသုံးပြုသည့် လက်ရှိ ဝဘ်ဆိုက်အားလုံးကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည်။ ငါ့လိုလူက သုံးတော့မယ်။ အခု မင်းရဲ့ ဆောင်းပါးကို မြင်တော့ ငါ အတွေး ၂ ခု ရှိတယ်။ အဲဒါအတွက် တစ်လကို ဒေါ်လာထောင်ချီသုံးဖို့ အခွင့်မသာဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ မထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်တောင်၊ ငါကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေကိုသုံးရင် ငါ့ကို ဒုက္ခအများကြီးပေးသေးတယ်။
မကြာသေးမီက နေရာတိုင်းတွင် ထိုသို့သော ပေါ်လာသည်ကို တွေ့နေရသည်။ exit-intent ပေါ့ပ်အပ်များမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ပေါ့ပ်အပ်များ- ပေါ့ပ်အောက်များ၊ အချိန်မီ ပေါ့ပ်အပ်များ၊ အဝင်-ပေါ့ပ်အပ်များ စသည်တို့သို့ ပြန်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ 26 ရက် 2015 ခုနှစ် ညနေ 3:31 နာရီ
ထို့ကြောင့်၊ Retyp၊ Optin Monster ၏နောက်ကွယ်ရှိလူများသည် Bounce Exchange ကိုဤမူပိုင်ခွင့်အတွက်တရားစွဲဆိုပုံပေါ်သည်။ ဒါပေမယ့် ပြေပြေလည်လည် နားလည်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ တရားဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီဘူး ဆိုရင် ရလဒ်က ဘာဖြစ်မလဲ...။ ဤလင့်ခ်များတွင် ပိုမိုသိရှိနိုင်သည်-
ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲသိရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ အရမ်းမိုက်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုလိုထင်ရပြီး ဒါကို တခြားနေရာတွေမှာ ရရှိနိုင်တာကို တကယ်မြင်ချင်ပါတယ်….
နိုဝင်ဘာလ 27 ရက် 2015 ခုနှစ် ညနေ 4:42 နာရီ
အဲဒါ တော်တော် စွဲလန်းစရာကောင်းတဲ့ Teyva ပါ။ ငါသဘောတူတယ်… အမိုက်စားဝတ်စုံ။
ဇွန်လ 30 ရက် 2016 ခုနှစ် နံနက်5နာရီ 46 မိနစ်
BounceX ရောင်းချသော ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု (နှင့် BounceX/Yieldify သည် ၎င်းတို့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးသည်) များသောအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို မူပိုင်ခွင့်တင်ရန် မကြာခဏမဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် အရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် core (ဤကိစ္စတွင် algo) ကို ကာကွယ်လေ့ရှိပါသည်။ ပုံဖန်တီးခြင်း၊ ၎င်းတို့မပိုင်ဆိုင်သော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုပေါ်တွင် ပုံတစ်ခုပေါ်လာခြင်းနှင့် နည်းပညာအရ ချိုးဖောက်ခြင်းစသည်တို့အတွက် မူပိုင်ခွင့်တစ်ခုရှိနေကြောင်း ကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။
Yieldify (ထိုကိစ္စတွင်တရားခံ) သည် တတိယအဖွဲ့အစည်းထံမှ မူပိုင်ခွင့်များကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ယခုအခါ BounceX ကို တရားစွဲထားကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် ပြိုင်ဘက်ကို လိုက်ရန် ငွေရှိလျှင် အန္တရာယ် နည်းပါးသည် - အကယ်၍ သင်သည် တူညီသော အနေအထားတွင် ရှိနေသော ကိစ္စတွင် ဆုံးရှုံးပါက သင်သည် ယခု (ငွေနှုတ်) သော်လည်း သင်အနိုင်ရပါက စျေးကွက် အပိုင်းတစ်ခုကို ဖောက်ထုတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်မျှဝေပါ။